DXVK 1.9.1 inouya nekugadzirisa mabhugi, kugadzirisa mashandiro uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Mazuva mashoma apfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeDXVK 1.9.1 yakaziviswa mariri kumwe kugadzirisa kwakagadzirwa kukanganisa uye kubviswa kwekodhi inoenderana neshanduro dzekare dzeMesa, pakati pezvimwe zvinhu.
Kune avo vachiri kusaziva nezve DXVK, vanofanirwa kuziva kuti chii chimwe chishandiso chakabatanidzwa mune iyo Steam Play basa kubva Steam. Icho chishandiso chinonakidza ichoe inogona kushandura Microsoft DirectX 11 uye DirectX 10 mifananidzo yemifananidzo kuVulkan, iyo yakavhurwa sosi yemifananidzo API inoenderana neLinux. Kuti ushandise DXVK, kuwedzera paWine neVulkan, zviri pachena kuti unoda Vulkan-inoenderana neGPU.
Ipo DXVK ichiri kushandiswa zvakanyanya paStam Play, haisi iyo yega nzvimbo vashandisi veLinux vanogona kutora mukana weiyi inoshamisa tekinoroji. Izvo zvinobatsirawo iyo Vulkan-based D3D11 kuitiswa kweLinux neWine, Nezve kuita uye kugadzirisa paunenge uchimhanyisa Direct3D 11 mitambo muWine, sezvo ivo vachipawo rutsigiro rweDirect3D9.
1 Main makuru maficha eDXVK 1.9.1
Main makuru maficha eDXVK 1.9.1
Mune ino vhezheni nyowani yekumisikidza ivo vanogadzira yakagadzirisa nyaya dzakasiyana dzekuita uye kugadzikana mushure mekugadzirisazve iyo D3D9 yekukiya michina, mukuwedzera kune iko iko iko kwekugadziriswa kwematanho ematanho muD3D11 akagadziridzwa, izvo zvakakonzera kushoma kwendangariro kushandiswa uye mashoma emifananidzo makopi anodikanwa kufambisa data pakati peiyo CPU neGPU.
Zvakare, iyo yekuvharira primitives yakagadzirwazve zvichibva paWindows SRW kukiya, ayo anoshanda zvakanyanya kupfuura mingw kuitiswa kwe winpthreads, pamwe ne workaround kodhi yeshanduro dzekare dzeMesa dzakabviswa (<= 19.0).
Kana ari nyaya dzakagadziriswa nemamwe mazita yemitambo yemavhidhiyo, zvinotevera zvinotaurwa:
Pasi Dziviriro Yemauto 5- Fixed performance nyaya dzinokonzereswa nemutambo kazhinji kutendeuka yakatwasuka sync pakati pemafuremu kuvhura nekuvhara.
Kurira kude 1: Nvidia GPU inonyepedzera kubvumira iyo yepamusoro mhando kupa mvura.
Far Mhere 5 uye mimwe mitambo yeNjini Injini: yakagadzirisa nyaya dzakasiyana siyana nekuda kweyekutanga memory.
GTA IV: Yakagadziriswa yakaputsika fomu rekunyorera iro raizotyora Gameplay paNvidia GPUs.
Kumuka 3: Yakagadziriswa tsaona paNvidia GPUs.
Nyika Yekupedzisira Kufungidzira: nechisimba dzima MSAA kugadzirisa mitambo yemabhugi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » DXVK 1.9.1 inouya nekugadzirisa mabhugi, kugadzirisa mashandiro uye nezvimwe
Henrique Afonso akadaro
Zvino, ini handisi kuita kuti kumisikidza kuitwe, kunoonekwa pane imwecheteyo meseji, hazvina basa kuti ndeipi vhezheni ye dxvk yaunofunga kuisa.
henrique @ henrique-Aspire-F5-573G: ~ $ cd Kurodha pasi
henrique @ henrique-Aspire-F5-573G: ~ / Downloads $ cd dxvk-1.9.2
henrique @ henrique-Aspire-F5-573G: ~ / Downloads / dxvk-1.9.2 $ sudo sh setup_dxvk.sh gadza
[sudo] senha ye henrique:
setup_dxvk.sh: 31: 0: haina kuwanikwa
waini: kumisikidzwa muL »/ root/.wine» yakagadziridzwa.
setup_dxvk.sh: 86: Kuchinja kwakaipa
henrique @ henrique-Aspire-F5-573G: ~ / Downloads / dxvk-1.9.2 $
Pindura Henrique Afonso
ProtonVPN inoratidza zviri pamutemo kushanda kwayo kweLinux ine graphical interface inosanganisirwa